Doka - iHorror
by Jon Pharr Janoary 3, 2021
Ny vaovao # 1 mampihoron-koditra indrindra, hevitra ary sehatra media miaraka amin'ny fahatsapana isam-bolana mihoatra ny 43.5 tapitrisa
iHorror dia iray amin'ireo mitombo haingana indrindra ary fantatry ny maro indrindra marika amin'ny karazana horohoro. iHorror dia napetraka tokana amin'ny maha-hany sehatra haino aman-jery natokana hampiarahana ny mpankafy azy mafy sy ny mpijery sarimihetsika mampatahotra. Miaraka amin'ny fahatongavany be sy ny fankasitrahana ny marika, iHorror dia mety indrindra ho an'ny marika mahazatra mba hifaneraserana amin'ity tohan-jaza ity izay tena be zotram-po sy tsy mivadika ary tsy misy fitsidihana lavitra loatra.
Izahay dia manova ny fomba fampiroboroboan'ny mpijery ny mpihaino azy ireo. Fanaterana ny lohateny multi-fantsona miaraka amin'ireo fitaovana izay mampiasa teboka angona, fahitana ary mangarahara manerana ny sehatra iHorror.
32.6 M Jery horonan-tsary
4.1 tapitrisa mpanaraka
25.5 K Mpanaraka
127 K Mpanaraka
604 K Mpanaraka
NY BUSINESS OF Horror
Ilay karazana horohoro dia nihoatra ny $ 1 Miliara tao amin'ny biraon'ny boaty.
Ireo mpankafy mampihoron-koditra dia mankao amin'ny teatra ary mandany vola be kokoa noho ny karazana mpanaraka sarimihetsika.
Manakaiky ny 50% amin'ireo mpankafy horohoro rehetra no manatrika sarimihetsika bebe kokoa izay in-12 isan-taona.
Ny mpihaino mampihoron-koditra dia samy hafa be noho ny mpijery blockbuster mahazatra.